> Resource> iPad> Olee otú Jiri iPad dị ka ihe mpụga ike mbanye
Mgbe atụnyere iPad na Android ngwaọrụ, ị nwere ike akwa ụta na iPad ike-eji dị ka a ike mbanye. Oge ọ bụla ị nyefee data, dị ka music ma ọ bụ video, ị nwere iji iTunes. Ka njọ, ndị data iTunes transfer na-mesoo ụfọdụ mmachi formats. Ọ pụtara na, ọ bụrụ na ị na-enweta ụfọdụ music ma ọ bụ vidiyo na-enweghị omume enyi formats, iTunes agaghị enyere gị nyefee gị iPad. Ihe a ọmịiko ọ bụ.
N'ihi ya, ọ bụ ga-ezu okè ma ọ bụrụ na ị pụrụ iji iPad dị ka ihe mpụga ike mbanye. Ọ ga-ekwe omume? Ọ dịghị ajirija. Ekele na omume ọma e software - na Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac), ugbu a, i nwere ike iji iPad mbupu, mbubata na ihichapụ data na gị iPad kpamkpam dị ka ị na-eme na mpụga ike mbanye.
Download a software na ike iṅomi ndị dị mfe nduzi. The abụọ nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ. Ebe a, m ga-dị na-egosi na ị na-esi eji iPad dị ka a ike mbanye mgbe iji Windows version.
Cheta na: The Windows version-eme nke ọma na ijikwa photos, music, video, na kọntaktị na SMS. Na Mac version, ị nwere ike ijikwa music, videos na foto na ya.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na jikọọ na gị iPad
Dị nnọọ ka ị na-emekarị na-eme, jikọọ gị iPad na kọmputa na ya eriri USB. Gbaa ndị software. Gị iPad ga-scanned n'oge na-adịghị, na mgbe ahụ na-egosi na window dị ka onye n'okpuru.
Cheta na: iPad Obere, iPad 2, The New iPad, iPad na iPad na Retina ngosi na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 5 & iOS 6 na-ọma na-akwado.
Nzọụkwụ 2. Iji iPad dị ka a ike mbanye
Nyefee faịlụ site na iPad na kọmputa / iTunes
Na ala akara nke Ohere, pịa Copy iDevice ka iTunes> Malite> Detuo na iTunes. Mgbe ahụ, ị nwere ike nyefee gị chọrọ media faịlụ ka iTunes. Site na ịpị Export Music ka nchekwa, ị na-ekwe ka ndabere nile music na nchekwa na kọmputa.
Abụọ buttons bụ ọ shortcut igodo nyefee faịlụ site na iPad. Ọ bụrụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara ọzọ faịlụ, dị ka photos, ị nwere ike na-atụgharị ekpe kọlụm. Pịa ọ bụla taabụ iji bugote ya management window. Tinye akà rà họọrọ faịlụ na mbupụ ha.
Copy faịlụ site na kọmputa na-iPad
N'otu aka ahụ, pịa otu udi, dị ka Media, na ekpe kọlụm. Na nri panel, pịa Tinye ma ọ bụ Import / Export idetuo music, video, foto na kọntaktị site na kọmputa, na mbubata iTunes playlist gị iPad.
Hichapụ ọ bụla faịlụ site iPad
Mgbe ịpị a Atiya on ekpe kọlụm, ị nwere ike họrọ faịlụ ị na-achọghị na-ọ bụla ọzọ na nri panel. Pịa Hichapụ iji wepụ ha si gị iPad.
The ọzọ ihe i nwere ike ime na nke a software
Nyefee faịlụ n'etiti iPad, iPhone na iPod.
Ike ọhụrụ listi ọkpụkpọ na ọba na gị iPad
Bugharịa photos na igwefoto Roll na album
Tinye ọhụrụ kọntaktị na iPad na keyboards na òké, ma jikota oyiri kọntaktị
Tọghata ọdịyo na video ka iPad enyi na enyi formats.
Ada magburu onwe? Ntak ịwụnye a software na-agbalị iji iPad dị ka ihe mpụga ike mbanye?
Video nkuzi maka Olee otú Jiri iPad dị ka mpụga ike mbanye
Otú iji melite iPad Speed
4 Ụzọ nyefee faịlụ ka iPad Obere na Retina ngosi